အမျိုးသမီးများအတွက် Vintage Backless Ribbed Plaid Harajuku သီးနှံအကျီင်္များ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်များ ၀ ယ်ရန် | WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက် Vintage Backless Ribbed Plaid Harajuku သီးနှံထိပ်များ
$16.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $33.99
အရောင် Khaki Black က အနက်ရောင် ပန်းရောင် ဆင်စွယ်ရိုး အဖြူ ညိုသော အညိုရောင် ကခီ ဘရောင်း 1 Black က 1
အရွယ် S M L
Khaki / S က Khaki / M က Khaki / L ကို Black က / M က Black က / S က Black က / L ကို အနက်ရောင် / L ကို ပန်းရောင် / M က ပန်းရောင် / S က ဆင်စွယ် / S က ပန်းရောင် / L ကို ဆင်စွယ် / L ကို ဆင်စွယ် / M က အနက်ရောင် / M က အနက်ရောင် / S က အဖြူ / M က အဖြူ / S က ဘရောင်း / S က အဖြူ / L ကို ဘရောင်း / L ကို ဘရောင်း / M က Brown / M Brown / S ကခ / S ဘရောင်း / L ကခ / လ ကခ / မီတာ ဘရောင်း 1 / M က ဘရောင်း 1 / S အနက်ရောင် 1 / S ဘရောင်း 1 / L ကို အနက်ရောင် 1 / L ကို အနက်ရောင် 1 / M
Khaki / S အမျိုးသမီးများအတွက်စပျစ်သီးပွင့်နောက်ကျောကြိုးအလှအကွက် Harajuku ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်ထိပ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသက် - အသက် ၁၈-၅၅ နှစ်များ
item အမျိုးအစား: ထိပ်
ပုံစံ - Streetwear
pattern အမျိုးအစား: Plaid
မှတ်စု: ကျေးဇူးပြု၍ အရွယ်အစားရွေးချယ်ရန်အရွယ်အစားဇယားကွက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ သင်၏အလေ့အထအရတိုက်ရိုက်မရွေးချယ်ပါနှင့်။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်အရွယ်အစားမှာ 2-3 စင်တီမီတာကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ သင်တိုင်းတာသည့်အခါသတိပြုပါ 1 လက်မ = 2.54cm
27 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ကြီးကြီးမားမားအလုပ်လုပ်ခြင်း Boobs လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားကြီးထွားလာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ Boobs တွေလိုတန်းစီမလာပါဘူး အထည်လည်းပြသကဲ့သို့တူညီသည်မဟုတ်
အလွန်တိကျမှန်ကန်မှုမရှိ DIDNT သို့သော်လည်းငါသည်အလတ်စားတယ်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ !!! ငါ့အပေါ်မှာဒါငါသေးငယ်တဲ့ကောင်းသည်ထင်ပါတယ်။ သင့်မှာ boob areaရိယာအများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရှပ်အင်္ကျီဟာမင်းမိန်းကလေးအတွက်မဟုတ်ဘူး
အတိအကျပုံများကဲ့သို့, mam ၏ iamgia ကဲ့သို့သောမလုပ်ထားဒါကြောင့် seethrough မဟုတ်ပါဘူး